Started this discussion. Last reply by ဦးခင် Feb 9, 2012.5Replies0Likes
သဗ္ဗရသံ ဓမ္မရသော ဇိနာတိဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
Red Ribbon From 2k9eo1s3hynju
phyuthi သည်Moeကို မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
mee mee သည်Moe's ၏ 'ခင်ပွန်းကြီး (၁၀)ပါး ကန်တော့နည်း' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
KO KO သည်Moe's ၏ 'မဟာသွံဿာရရုပ်ရှင်တော်မြတ်ကြီး ၏ ထူးခြားချက်များ' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
KO KO သည် Moe's၏ '"ငါအိုသွားတဲ့အခါ"'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
KO KO သည်Moe's ၏ '"ငါအိုသွားတဲ့အခါ"' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
Moe သည် လှိုင်ကျော်ထွေး's၏ '(၆)ကြိမ်မြောက် အလှူပွဲအတွက် အလှူငွေစာရင်း ရှင်းတမ်း'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
"အလှုပွဲဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် ရှေ့ဆုံးမှဦးဆောင်ဦးရွက်ဖြင့် အပင်ပန်းခံကြိုးစားပေးသော ကိုလှိုင်ကျော်ထွေး…"
Moe သည် လှိုင်ကျော်ထွေး's၏ 'စုပေါင်း ဆင်နွှဲ (၆)ကြိမ်မြောက် အလှူပွဲ'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
"လှုရတာလဲပျော်ဖို့ကောင်း............. ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာလဲ စားလို့ကောင်း........................ ကားပေါ်မှာလဲ အိပ်လို့ကောင်း.................................................."
Moe replied to A BuddhismworldAdmin's discussion '(ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ သာသနာဟိတ)မြန်မာနိုင်ငံမှအကျိုးတော်ဆောင်များစာရင်း' in the group ဗုဒ္ဓကမ္ဘာဆိုဒ်(သာသနာဟိတအသင်း)
"(၁)အမည် = မအိအိမိုး (၂)မှတ်ပုံတင်နံပါတ် = ၁၂/မရက(နိုင်)၁၂၄၇၈၄ (၃)နေရပ်လိပ်စာ=အမှတ်-၆၈/A, အုတ်ကျင်းဘူတာရုံလမ်း, ၁၆-ရပ်ကွက်, လှိုင်မြို့နယ်, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ (၄)ဖုန်းနံပါတ် =၀၉-၄၅၀၀-၁၆၁၈၇ (၅)မေးလိပ်စာ…"
အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ) သည်Moeကို မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
"အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ) လာရောက်လည်ပတ် ဆက်သွယ်သွားပါတယ်...။ ven.pandita.nps@gmail.com"
Moe သည် အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ)'s၏ '၁၃၇၅-ခုနှစ် ၀ါဆိုသင်္ကန်းဆက်ကပ်မည့်ကျောင်းကို အသိပေးကြေညာခြင်း'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
"တပည့်တော် ၃စုံ လှုဒါန်းပါ့မယ်ဘုရား"
မေ 8, 2013
Moe sharedaprofile on Facebook
Moe သည်Ashinkhemeindaကို မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
Moe သည် ဓါတ်ပုံတင်ခဲ့ပါသည်။
Moe သည်♣တောသူမလေး♣ကို မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
♣တောသူမလေး♣ သည်Moeကို မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
_origwidth="480" _origwidth="480" _origwidth="446"
ဒီဘလော့ကို ဖေဖော်ဝါရီ 6, 2012 တွင်8:42pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments 1 Like
အချစ်အကြောင်း ပြောကြမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုး အများစုက "၁၅၀၀ အချစ်" နဲ့ "၅၂၈မေတ္တာ" ဆိုပြီး နှစ်မျိုးခွဲပြောလေ့ ရှိကြတယ်။ သမီးရည်းစား အချစ်ကို "၁၅၀၀ အချစ်" ၊ ပူလောင် ပြင်းပြတဲ့ အချစ်လို့ ပြောပြီး . . . မိဘတွေရဲ့ သားသမီးအပေါ်ချစ်တဲ့ အချစ်ကိုတော့ "၅၂၈ မေတ္တာ" ၊ အေးမြချမ်းမြေ့တဲ့ ချစ်ခြင်း မေတ္တာ ဆိုပြီး ယူဆ ပြောဆိုလေ့…
ဒီဘလော့ကို ဖေဖော်ဝါရီ 6, 2012 တွင်8:09pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။3Comments 1 Like
ဒီဘလော့ကို ဇန်န၀ါရီ 28, 2012 တွင်4:29pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။4Comments 1 Like
ပြန်သွားတော့ လည်း တစ်ယောက်တည်းနော်
ဒီဘလော့ကို ဇန်န၀ါရီ 22, 2012 တွင်3:15pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 1 Comment 1 Like
( ဒီမှာထူးခြားတာက နတ်ပြည်ကနေ စုတေကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ အလောင်းတော်တွေဟာ ဗြဟ္မာပြည်ကနေ စုတေပြီး ပဋိသန္ဓေ နေတော်မူတာမျိုးမရှိပါဘူး..တဲ့ ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဗြဟ္မာပြည်ကနေ လာရင် ကာမဂုဏ်ကို ရွံမုန်းတဲ့ စိတ်အထုံ လူ့ပြည်ကို ပါလာမယ် ။ အဲလိုဆိုရင်အိမ်ထောင်ပြုမှာ မဟုတ်ပါဘူး ။ အလောင်းတော်တွေဟာ ဒီလို စောစောစီးစီး ကတည်းက ကာမဂုဏ်ကို ရွံမုန်းနေရင်လည်း မဇ္စိမပဋိပဋာ…
9:24pm အချိန်ဇန်န၀ါရီ 29, 2015, တွင် phyuthi မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
2:35pm အချိန်ဇွန် 17, 2013, တွင် အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ) မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ) လာရောက်လည်ပတ် ဆက်သွယ်သွားပါတယ်...။ ven.pandita.nps@gmail.com
11:43am အချိန်ဇန်န၀ါရီ 29, 2013, တွင် ♣တောသူမလေး♣ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
7:05am အချိန်ဇန်န၀ါရီ 29, 2013, တွင် hla moe 24 မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
မွေးနေ့ မင်္ဂလာပါ ညီမရေ..........ဘာတွေ လုပ်ဖို့ အစီစဉ်ရှိလဲး........စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျမ်းမာပါစေ ကောင်းသော လိုရာဆန္ဒတွေ ပြည့်ဝပါစေ..အကြောင်းပြန်ပါ
4:37pm အချိန်အောက်တိုဘာ 30, 2012, တွင် ♣တောသူမလေး♣ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
10:24am အချိန်စက်တင်ဘာ 27, 2012, တွင် uoaktama မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
ဂေါတမဗုဒ္ဓရဲ့ရင်ဘတ်ပေါ်မှာ ကြက်ခြေခတ်အမှတ်အသားမပါဘူး။ ဂျိမ်းဘုရားမှာဘဲပါတယ်။
12:23pm အချိန်စက်တင်ဘာ 19, 2012, တွင် hla moe 24 မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
ဟယ်.........သနားပါတယ်.......ပီဇာက ကျက်တော့မှာ နောက်ပြီး...ပုဇွန်ဂွက်ကျော်သုတ်နဲ့ 
ရခိုင်မုန့် တီကလည်း ရတော့မှာ ........နောက်တခါပေါ့
11:24am အချိန်စက်တင်ဘာ 8, 2012, တွင် hla moe 24 မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
ညီမလေး မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ ပြည့်စုံပြီး လိုအင်ဆန္ဒတွေ ပြည့်ဝပါစေ
လာလယ်သွားပါတယ် ဆိုဒ်ထဲးလဲး လာပါအုံး
1:14am အချိန်သြဂုတ် 21, 2012, တွင် နီစံ (အနီ) မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
မမိုးရေ ညီမလေးလဲ လာလည်သွားပါတယ်
လက်ဆောင်တော့ပေးချင်ပါတယ် ဒါပေမယ့် လိုင်းကအရမ်းလေးနေလို့..:)
1:48am အချိန်သြဂုတ် 14, 2012, တွင် hla moe 24 မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
ညီမလေး မိုး ထပ်ပြီးလာလယ်သွားပါတယ်...ဗိုက်ဆာလို့ လေ ဟီးးးးးဟိုတခါ ကိတ်မုန့် က